Isoftware yoLawulo lweProphu yokuNyusa ishishini
NgoMvulo, nge-3 kaDisemba ngo-2012 NgoMvulo, nge-3 kaDisemba ngo-2012 UJenn Lisak Golding
Kule minyaka imbalwa idlulileyo, ukuthengisa kutshintshe kakhulu ngokuza kwexesha ledijithali. Ngokukodwa, indlela abantu abathumela kunye nokufumana ngayo izindululo zentengiso ziye zaphuculwa kunye nophuhliso lwe iinkqubo zolawulo lwentengiso kwi-Intanethi, Njengomthengi wethu iTinderBox. Kutheni le nto ezi zisombululo zingcono kunokubhala nje isindululo sokuthengisa kwiMicrosoft Word? Ewe, senze yonke into malunga nayo.
Imveliso inyuswe kakhulu ngokusebenzisa esinye sezisombululo, kunye nengeniso. Isoftware esekwe kwilifu iphucule ukuhamba kwenkqubo yentengiso, kwaye ke, umjikelo wentengiso uphuculwe, nawo. Nokuba ulishishini elincinci, umnini yedwa, okanye inkampani enkulu, ezi zixhobo ziya kukugcinela ixesha kunye nemali. Kodwa kuxhomekeke kwindlela ozisebenzisa ngayo.
Ukubhengeza kwiimpawu ezininzi yindlela efanelekileyo yokubandakanya ithemba. Kwisindululo sakho, kuya kufuneka usebenzise ividiyo, iaudiyo (ukuba iyasebenza), kunye nemifanekiso yokubamba ingqalelo. Izindululo ezinophawu lwentengiso licebo elilungileyo ngokunjalo, kodwa qiniseka ukuba aloyiki kakhulu. Isiphakamiso kufuneka sibe malunga nokuba ithemba liya kubona njani iimfuno zabo zidibene ngokubanzi.
Ndinomdla- uthumela njani ngoku kwaye wenze izindululo zakho? Imeyile? Uxwebhu lwegama? Nguwuphi owona mceli mngeni wakho omkhulu ngezindululo zokuthengisa?
tags: fumana ibhokisikwi-infographicisilulekoUlawulo lwezindululoIsoftware yokulawula isindululoIbhokisi yetinder
Uluhlu lwam lokuThengisa kwi-Intanethi kuMyalelo oPhambili